Basikety: hitazona ny anaram-boninahitra ny SBBC | NewsMada
Basikety: hitazona ny anaram-boninahitra ny SBBC
Vonona tanteraka ny ekipan’ny SBBC Boeny, hiatrika ny fiadiana ny tompondaka an’i Madagasikara N1A , manomboka anio. Ny ho tompondaka hatrany ny tanjona.
Na eo aza ny olana sedrain’ny klioba, izay itovizana amin’ny klioba rehetra, dia ny fiantohana iray manontolo ny lany amin’ny fiatrehana ity fifaninanana ity, hitazona ny anaram-boninahitra hatrany ny SBBC, raha ny nambaran’ny filohan’ny klioba, i Robijaona Orlando. Na somary taraiky ihany koa aza ny fanomanan-tena, efa niezaka nanarina izany ny ekipa, raha ny nambaran’ny mpanazatra, Razazarohavana Malalatiana. Tsiahivina, nandritra izay 6 taona nijoroany izay, ny taona 2018 ihany ity klioba ity, no tsy nibata ny amboara tamin’ny fifaninanana nasionaly.
Mahakasika ny mpilalao, nisy ireo nifindra klioba, toa an’i Fanja, izay nivadika any amin’ny COSPN2. Na izany aza, feno tsara ny mpilalao handrafitra ny ekipa, hoy hatrany ny mpanazatra. Mbola mijoro tsara sy afaka mitondra fandresena ho an’ny klioba ry Lynda, Maevah, Lilya sy ny maro hafa. Hery lehibe ho azy ireo ihany koa ny fiverenan’i Prisca hilalao indray amin’ity, izay tsy misy mahasolo hatreto, indrindra amin’ny fangalana isa telo. Miisa eo amin’ny 10 mirahavavy eo ny mpilalao amin’izao ary efa nivondrona sy niara-nikotrana izy ireo, vantany vao nahafantatra ny datin’ny fifaninanana, hoy ny nambaran’ny kapitenin’ny ekipa. Rahampitso alahady no hiakatra an-kianja ny SBBC, hifandona amin’ny JEA Vakinankaratra.
Fitiavana ny manosika ny klioba
Namboraka ny tao am-pony, ny filohan’ny klioba fa fitiavana ny mbola mampijoro azy ireo toy izao. Tsy misy tombony na vola miditra fa ny mivoaka aza no betsaka, ao anatin’ny fitantanana klioba toy izao. “Hatramin’ny niatombohan’ny fiomanana amin’ity N1A ity, efa tsy takatry ny saina ny vola lany, noho ny fitiavana ny klioba sy ny taranja basikety”, hoy ny nohamafisin’i Robijaona Orlando. Ny klioba avokoa mantsy ny miantoka ny lany rehetra rehefa misy fifaninanana toy izao. Etsy an-kilany anefa, tsy misy vola azo avy amin’ny federasiona. Mahakasika ny fifindran’ny mpilalao any amin’ny klioba hafa, misy ireo sintomin’ny klioba matanjaka fotsiny tsy misy resaka, kanefa tokony hisy vola hiditra ho an’ny klioba nipoirana, hoy hatrany ity filoha ity. Manaitra ny federasiona, araka izany, mba hijery akaiky ny mahakasika ny famindrana mpilalao, izay tokony hisy fitsipika mifehy. Ankoatra izay, manentana ny fanjakana ihany koa ny klioba, mba hijery ireo mpilalao sy atleta mitondra avo ny voninahi-pirenena, amin’ny fanomezana tambiny ho azy ireo.